Taona Fito Taorian’ny Namonoana Azy, Mbola Tavela ny Lovam-Panantenana Navelan’i Farzad Kamangar, ilay Kiorda Mpampianatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Mey 2017 5:14 GMT
Farzad Kamangar sy ireo mpianany. Sary natolotry ny Masoivohom-Baovaon'ireo Mpikatroka Mpiaro Zon'Olombelona (HRANA)
Manamarika ny fahafito taonan'ny namonoana tao anatin'ilay fonja malazan'i Evin an'ilay Kiorda mpampianatra sady mpikatroka Farzad Kamangar ny 9 May. i Kamangar dia nampangaina ho mpikambana ao amin'ilay vondrona Kiorda mpanohitra, PJAK ary nohelohina ho faty taorian'ny fitsaràna fohy tsy nanaraka ny dingam-pitsaràna tokony ho izy.
Ao Iràna, miatrika fanavakavahana sy famoretana mitohy ireo foko Kiorda, ary mbola mitohy mitolona ho an'ny zon'izy ireo sy ny fizakantenany. Ny fikatrohan'i Kamangar dia tsy nifantoka tamin'ny maha-izy azy hoe Kiorda fotsiny, fa amin'ny maha-Iraniàna nanohitra ilay fitondrana anjakan'ny resa-pivavahana koa ary niady ho an'ireo zon'ny vahoaka sy ny vondrom-piarahamoniny.
Sady mpikatroka i Kamangar no mpampianatra taminà sekoly ambaratonga fototra tany avaratra-andrefan'ilay tanàna Iraniana ao Kamyaran, toerana maha-mpikambana azy ihany koa ao anatin'ny Sendikan'ireo Mpampianatra ao Kiordistàna, ary nanoratra ho anà fanontàna miafina maro samihafa miresaka zon'olombelona. Taorian'ny fisamborana azy, nitondra ho amin'ny fanamelohana avy amin'ireo fikambanana iraisampirenena ireo taratasy ny lahatsoratra avy amin'i Kamangar momba ny fepetra tsy araka ny maha-olona iainana ao am-ponja, isan'ireny fikambanana ireny ny UNICEF sy ny Education International, fikambanana iray izay misolo tena ireo mpampianatra manerana izao tontolo izao. Novonoina izy tamn'ny 9 May 2010, niaraka taminà mpifonja Kiorda telo hafa: Ali Heydarian, Farhad Vakili, ary Shirin Alam-Holi.
Nanohy fombandrazana efa fanao hatry ny elabe ao Iràna i Kamangar amin'ny fanaovana sorona ireo tanora mpikatroka politika efa hatrany amin'ny revolisiona 1979, ary nihoatra lavitra an'ilay Praiminisitra malaza ho demaokraty Mossadegh izay voaendaka teo amin'ny toerany noho ny fanonganam-panjakana notarihan'ny CIA taminìny 1953, ary ilay revolisionan'ny lalàm-panorenana tamin'ny 1906. Ny fiainany sy ny fampianarany dia nitovy betsaka tamin'ny an'ilay Iraniana mpanoratra sady mpampianatra, Samad Behrangi. Samy mpampianatra Marksista izy roalahy, izay netsehin'ny fahantrana hitan'ny masony tany ambanivohtr'i Iràna, ary taty aoriana dia lasa lasibatry ny herisetran'ny fitondràna.
Sarotra ny hamehy ny àty lalina maha-izy azy ny mpikatroka iray toa an'i Kamangar ho anaty fideràna fohy. Tsy mety ihany koa ny hanandrana ny hampiditra ny fiainany sy ny tolony ho anaty fehezanteny fohy vitsivitsy. Kanefa ny fahafatesany, ary be lavitra noho izany aza ny fiainany sy ny fomba niainany azy, dia nanana fiantraikany lalina tamin'ny andian-taranaka Iraniàna iray izay lasa milòna politika taoriana kelin'ireo hetsi-panoherana tamin'ny 2009, izay nahitàna olona an'aliny nidina an'arabe hanohitra ny hosoka tamin'ny fifidianana.
Mampahatsiahy antsika i Kamagar hoe miverina matetika ny tantara, ary misy hery ao anatin'ny fihantsiana sy ny fahamendrehana. Toa an'i Samad Behrangi, ankehitriny ny fahafatesan'i Farzad dia nampakatra ireo teniny sy ireo asany ho ambony ao anatin'ny fanoherana lavareny nentindrazana manoloana ny jadona ao Iràna.
Raha tokony ho famintinana ny fiainany, dia avelako ianareo ho ao anatinà tsonga iray avy amin'ny iray tamin'ireo taratasy farany avy aminy, talohan'ny namonoana azy. Ilay taratasy izay nosoratany ho an'ireo mpiray efitra taminy tao am-ponja ary ny fianakaviany dia mitantara ny taratry ny diany toy ny an'ilay Trondro Mainty Kely avy amin'ny iray amin'ireo tantara malaza indrindra nosoratan'i Behrangi. Ny fandikàna dia tolotra avy amin'ny Bilaogy Anglisy Fandikàna ny Amnesty International:
Mety hisy ve ny hoe mpampianatra ianao fa tsy manondro ny làlana mankany an-dranomasina ho an'ilay trondro kelin'ny firenena? Inona no mahasamihafa azy raha toa ry zareo avy any Aras [ renirano iray any avaratra-andrefan'i Iràna, Azerbaijàna], Karoon [renirano iray any atsimo-andrefan'i Iràna, Kozestàna Sirvan [renirano iray any Kiordistàna] na Sarbaz Rood [renirano iray any amin'ny faritra Sistàna sy Balotsestàna ]? Inona no mahasamihafa azy raha toa ka fitodiana iraisana ilay ranomasina, mba ho tafaraka ho iray? Ny masoandro no mpitaridia antsika. Fa aleo ny valimpitiantska ho ny fonja, tsara kosa izany an!
Afaka atao ve ny hitondra entana mavesatra amin'ny maha-mpampianatra no sady ho tomponandraikitra hanapariaka ny voan'ny fahalalana ary hitoetra tsy hiloa-bava? Afaka atao ve ny hahita bongana eo amin'ny traotrakan'ireo mpianatra no sady ho vavolombelon'ny endrik'izy ireo fisaka sy tsy ampy sakafo dia hanohy tsy hiteny?
Afaka atao ve ny hiaina taona iray feno ny tsy rariny sy tsy fitoviana ary tsy hahavita hampianatra ny F ho an'ny Fanantenana ary ny M ho an'ny hoe Mitovy, na atao aza hoe hitondra anao any amponjan'i Evin ny fampianarana tahaka izany na hiafara amin'ny fahafatesanao?
Tsy vitako ny maka sary ao an-tsaina ny maha-mpampianatra ahy ao amin'ny tanin'ny Samad, Khan Ali, sy Ezzati ka tsy hanjohy ny fiainana mandrakizain'i Aras. Tsy vitako ny haka sary ao an-tsaina ny hanatrika ny fangirifiriana sy ny fahantran'ny vahoakan'ity tany ity ary tsy hahavita hanome ny fontsika ho an'ilay renirano sy ilay ranomasina, hirohondrohona sy hanondraka.
Fantatro fa indray andro any, ho vita rarivato ho an'ireo mpampianatra ity làlana henjana sy mikintaontaona ity ary ny fijaliana iaretanareo dia ho toy ny mariky ny voninahitra mba hahafahan'ny tsirairay mahita fa ny làlan'ny mpampianatra iray, na lahy na vavy izy, dia nobahanan'ireo dingana fanivànana, ny fonja ary ny famonoana. Ilay trondro mainty kely fa tsy ny vano no hitondra voninahitra ho an'ilay mpampianatra.
Fanamarihan'ny mpandika: Aras dia renirano iray any avaratra andrefan'i Iràna, manamorona an'i Iràna sy Azerbaijàna. Samad Behrangi dia tondrak'ilay renirano tamin'ny fotoam-pahavaratra 1968. Heverin'ny sasany fa mampiahiahy ny manodidina ny nahafatesany ary ireo olon'ny fitondràna Sha no nomena tsiny tamin'izany fahafatesany izany